Soo dejisan Virtual DJ 8.2.3440 iyo 7.4.7 – Vessoft
Soo dejisan Virtual DJ
DJ Virtual – aalad awood si ay u abuuraan ama edit ka kooban a muusikada oo ah noocyo kala duwan. software The waa qumman yahay, waayo, DJ xirfadeed iyo muusikalayda bilaabayso. Virtual DJ u saamaxaaya in ay qabsato xawaaraha loo maqli of files audio isku qasnaa oo, xaqiiqda ku soo saari sanqadha diiwaanka vinylalkohol, xusuuso booska mugga of track ah, iwm DJ Virtual ku jira alaabtii badan iyo saamaynta muusikada si ay u abuuraan music kala duwan digital. Sidoo kale software waa socon la ilaaliyaal music badan iyo MIDI-qalabka.
xulashada badan oo alaabtii muusikada
Joogitaanka saamaynta dhawaaqa kala duwan
loo maqli Suurogal ah diiwaanka vinylalkohol
Taageerada karaoke ah
La socon qofka xukuma ugu music
Virtual DJ Software la xiriira:
العربية, English, Español, Português... Hot Jingle Player 1.1